Umhlinzeki we-Iron Baluster ne-Spindles
IBoya Metal ingumkhiqizi okhethekile we-baluster eChina. Ama-balusters yizinduku ezincanyana noma iziphini zokunikezela ezisekela mpo kukaloliwe. Zisebenza futhi njengomvikeli ovikela abantu ekuweleni ngegebe eliphakathi kwezinyathela kanye ne-handrail. Singakhipha i-variou ...
I-China Steel Tubing Scroll Factory
IBoya Metal iyimboni ekhethekile engakhiqiza umqulu we-tubing osezingeni eliphakeme eNyakatho neChina. Iscrolling tubing senziwe ngensimbi yensimbi noma ngensimbi eyakhiwe, engasetshenziselwa ukwakha okwensimbi kocingo, amasango nokuningi. Umqulu weshubhu ungowemikhiqizo yensimbi yokuhlobisa, ububanzi be-decora ...
Umthengisi we-China Element Iron Element
Ukuhlobisa kwensimbi okwenziwe kungaphrinta noma iyiphi ipaki, ingadi noma kuvulandi, inkampani yethu i-Hebei Boya Metal Products Co, Ltd ithatha ukukhethwa okubanzi kwensimbi yensimbi ne-aluminium ifenisha yekhwalithi ephezulu kakhulu, imikhiqizo yenziwa efektri yethu ngensimbi yethu enekhono abasebenzi futhi siyaqhubeka sisebenza ...
I-China Casting, Investment Casting
Ikhomishini yethu ukukhonza abasebenzisi kanye nabathengi bethu ngekhwalithi enhle kakhulu futhi enezinto zedijithali ezinolaka zeFektri ezithengisa kakhulu i-China Cast Steel. Ifektri ithengisa kakhulu i-China Casting, i-Investment Casting, Ukuthuthukiswa kwenkampani yethu akudingi nje kuphela isiqinisekiso sekhwalithi, i-reasonabl ...
Insimbi evela eChina
Ikhwalithi enhle iza kuqala; insizakalo ihamba phambili; inkampani iyasebenzisana ”yifilosofi yebhizinisi lethu ebonwa njalo futhi ilandelwe yinhlangano yethu yekhwalithi enhle. Samukela abathengi abasha nabadala abavela ...
I-Hebei Boya Metal Products Co., Ltd.
Izimpahla zamakhasimende zigcinwa ngokwehlukana ngokwendawo, zihlelwe kahle, zilawulwa ngokukhethekile, futhi zihlolwa nsuku zonke ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi iyadlula, futhi izimpahla zizothunyelwa ngokushesha nje lapho sezipakishiwe. Umshayeli wethu omuhle uzothumela ngokushesha nangokuphepha ikhasimende ...
INorth-Cycle Road Of Xinle, Hebei ， China